Daawo: AMISOM oo xashiish iyo daroogo ku abuurtay beero ay leeyihiin shacab | Dalkaan.com
Home Warkii Daawo: AMISOM oo xashiish iyo daroogo ku abuurtay beero ay leeyihiin shacab
Muqdisho (dalkaan) – Shacabka beeraleyda ah ee ku dhaqan degaanka Golweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa weli cabasho xoogan ka muujinaya ciidamada AMISOM ee ka howl-gala degaankaasi, kuwaas oo la sheegay inay fariisimo ka dhigteen beero ku yaalla degaankaasi.
“Si kasta oo aan dadaal badan u suubiyey waxaa dhacday in arrintan xitta dowladdu ay wax ka qaban weysay,” ayey markale wareysiga ku tiri Faadumo Cumar Xasan.
“Aniga Faadumo shaqsi ahaan waan awoodaa inaan beerteyda sanad gudaheed ku kiciyo, bil gudaheed ku kiciyo dhaqaale ima celinaayo, laakiin awood-baana jirin meesha. Aaway dowladdii Soomaaliya, aaway qareenadeenii?,” ayey tiri ugu dambeyntii Faadumo Cumar.
Previous articleChelsea oo dooneysa inay Xili Hore soo Afjarto Amaahda Saul Niguez
Next articleXasan Sheekh Maxamuud oo weerar culus ku qaaday FARMAAJO
Barcelona oo dooneysa inay Matthias Ginter keento Camp Nou.
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso in ay si xor ah kula soo saxiixato xiddiga kooxda Borussia Monchengladbach ee Matthias...